AK vs AK(2020) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားကတော့ IMDb rating 7.2 ရရှိထားတဲ့ Drama/Thriller အမြိုးအစားBollywood ဇာတျကား တဈကားဖွဈပါတယျ။တကယျ့နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှဖွေဈတဲ့Anil Kapoor ,Anurag Kashyap,Sonam Kapoorအဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ….
ဇာတျလမျးအညှနျးအနူရား(ဂျ)ဆိုတာ တကျသဈစ ဒါရိုကျတာလေး… သူဟာ ဇာတျညှနျးကောငျးကောငျးရှိလို့ နာမညျကွီး မငျးသား အနေး(လျ)ကို သူ့ရဲ့ဇာတျကားတဈကား မှာ ရုပျဆောငျပေးဖို့ ကမျးလှမျးခဲ့တယျ…မငျးသားက ဒါရိုကျတာပေါကျစဆိုတော့ ငွငျးလိုကျတယျ….
မငျးသားရဲ့အငွငျးတဈခကျြက ဘာမဟုတျပမေဲ့ အနူရားလို ဒါရိုကျတာပေါကျစအဖို့အတျောဆုံးရှုံးမှုတှမြေားပါတယျ…ဒီလိုနဲ့အခြိနျ(၁၅)နှဈခနျ့ကွာတော့ ပွောငျးလဲမှုတှအေတျောကွီးလာတယျ..အနူရားဟာ နာမညျကွီးဒါရိုကျတာဖွဈလာသလို အနေးလညျးအသကျအရှယျကွောငျ့ အဘိုးတှေ ဉီးလေးတှနေရောမှာပဲသရုပျဆောငျရငျး အကဘြကျကိုရောကျနတေယျ…
ဒီလိုနဲ့ ဒါရိုကျတာနဲ့မငျးသားကိုတိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ TVအစီအစဉျတဈခုကနေLiveလှငျ့ရငျး အငျတာဗြူးဖွဈကွတယျ..သူတို့(၂)ယောကျပွနျဆုံတဲ့အခြိနျမှာ ဟိုးတဈခြိနျက သူ့ကိုအကနြာအောငျလုပျခဲ့တဲ့မငျးသားအပျေါဒါရိုကျတာရဲ့ ဒေါသတှဟော ပုံကလြာတယျ…တဈနိုငျငံလုံးဝိုငျးကွညျ့နတေဲ့ TVအစီအစဉျမှာ မငျးသားကို မကျြနှာရနေဲ့ပကျခဲ့တယျ…
အိန်ဒိယရဲ့ ရုပျသံတှေ သတငျးစားတှေ ဂြာနယျတှဟော ဒါရိုကျတာရဲ့ ရိုငျးစိုငျးကွမျးတမျးမှုတှကေို မကျြနှာဖုံးကွီးတပျပွီးဆျောကွပါတယျ…အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ ပွဿနာမြိုးစုံတကျပါတော့တယျ…ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့…ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး…
ဒီဇာတ်ကားကတော့ IMDb rating 7.2 ရရှိထားတဲ့ Drama/Thriller အမျိုးအစားBollywood ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။တကယ့်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့Anil Kapoor ,Anurag Kashyap,Sonam Kapoorအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်….
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းအနူရား(ဂ်)ဆိုတာ တက်သစ်စ ဒါရိုက်တာလေး… သူဟာ ဇာတ်ညွှန်းကောင်းကောင်းရှိလို့ နာမည်ကြီး မင်းသား အနေး(လ်)ကို သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကား မှာ ရုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်…မင်းသားက ဒါရိုက်တာပေါက်စဆိုတော့ ငြင်းလိုက်တယ်….
မင်းသားရဲ့အငြင်းတစ်ချက်က ဘာမဟုတ်ပေမဲ့ အနူရားလို ဒါရိုက်တာပေါက်စအဖို့အတော်ဆုံးရှုံးမှုတွေများပါတယ်…ဒီလိုနဲ့အချိန်(၁၅)နှစ်ခန့်ကြာတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေအတော်ကြီးလာတယ်..အနူရားဟာ နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာဖြစ်လာသလို အနေးလည်းအသက်အရွယ်ကြောင့် အဘိုးတွေ ဉီးလေးတွေနေရာမှာပဲသရုပ်ဆောင်ရင်း အကျဘက်ကိုရောက်နေတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ဒါရိုက်တာနဲ့မင်းသားကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် TVအစီအစဉ်တစ်ခုကနေLiveလွှင့်ရင်း အင်တာဗျူးဖြစ်ကြတယ်..သူတို့(၂)ယောက်ပြန်ဆုံတဲ့အချိန်မှာ ဟိုးတစ်ချိန်က သူ့ကိုအကျနာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မင်းသားအပေါ်ဒါရိုက်တာရဲ့ ဒေါသတွေဟာ ပုံကျလာတယ်…တစ်နိုင်ငံလုံးဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ TVအစီအစဉ်မှာ မင်းသားကို မျက်နှာရေနဲ့ပက်ခဲ့တယ်…
အိန္ဒိယရဲ့ ရုပ်သံတွေ သတင်းစားတွေ ဂျာနယ်တွေဟာ ဒါရိုက်တာရဲ့ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းမှုတွေကို မျက်နှာဖုံးကြီးတပ်ပြီးဆော်ကြပါတယ်…အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ပြဿနာမျိုးစုံတက်ပါတော့တယ်…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့…ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…
My Friend’s Older Sister – Link 1